आज देशका धेरै जसो ठाउँमा मेघग`र्जन सहित व र्षा हुने !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Weather Forecast/आज देशका धेरै जसो ठाउँमा मेघग`र्जन सहित व र्षा हुने !!
काठमाण्डाै – आज देशका धेरैजसो ठाउँमा मेघगर्जन सहित व`र्षा हुने मौसमविद्ले बताएका छन् । अंपुन चक्र`वातको प्रभा`वका कारण पूर्वी र मध्य क्षेत्रका सबैजसो ठाउँ र पश्चिमका केही ठाउँमा मेघ`गर्जन, चट्या`ङ तथा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् शान्ति कँडे`लले बताउनु`भयो ।
आज दिउँसोपख चक्र`वातले नेपाली जमिन छुने र त्यसपछि मेघगर्जन, वर्षा तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने उहाँले बताउनुभयो । आज बेलुकीपख चक्रवातको प्रभाव बढि पर्ने र रातिबाट प्रभाव कम हुँदै भोलि बिहीबार दिउँसोबाट मौसम मा सुधार आउन थाल्ने मौसम पूर्वानूमान् महा शाखाले जनाएको छ ।
चक्रवातको प्रभाव ३/४ दिन रहने भएकोले अबका केही दिन मौसम केहीबेर खुले पनि बादल तथा सामान्य वर्षा पनि हुने महा`शाखाले जनाएको छ । अंपुन चक्रवातको अप्रत्यक्ष प्र`भावले मेघगर्जन, चट्याङ र हावा`हुरी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिम पातको समेत सम्भावना रहेकोले स`तर्कता अपनाउन महा शाखाले अनुरोध गरेको छ ।
वर्षाका कारण खोलानालाहरुमा पानीको मात्रा बढेर बाढीसमेत आउन सक्ने भएकोले त्यसबारेमा पनि सचेत हुन भनिएको मौसमविद् कँडेलले बताउनुभयो ।